China chiuno chiuno chakayambuka rwizi shongwe Kugadzira uye Fekitori | XY Shongwe
Fekitori pikicha & vhidhiyo
denga pamusoro peshongwe
chubhu simbi shongwe
Ground yakasimudzwa furemu
magetsi echinzvimbo chimiro
kuzvipira & chirongwa
Hunhu manejimendi manejimendi
Hutano, Chengetedzo & Zvakatipoteredza
yakapetwa kaviri kuyambuka rwizi rwizi
Kugamuchirwa kushanyira webhusaiti yedu. XY Shongwe ndeimwe yemakambani anotungamira mu tower-gadzira indasitiri kumadokero kweChina.
XY Shongwe inopa akasiyana siyana kwakakurudzira simbi zvivakwa, nyanzvi mukutapurirana shongwe, chinotsiviwa chimiro, kutaurirana shongwe, nezvimwewo Neboka revashandi, tinopa kuzvipira kupa mhando chigadzirwa nehunyanzvi sevhisi kune vese vatengi vedu. Tiri pachokwadi kutarisira kubatana.
Nei XY Shongwe
Towers haingotariswe sechigadzirwa, asiwo sevhisi. Kubva pakukwirisa, kunyepa, kuunganidza chimwe nechimwe chinhu uye kuendesa kwechigadzirwa chakasarudzika, XY Shongwe iripo pamwe chete necheni rese rekukosha.
Mainjiniya anobatsira kudzikisa mutengo weprojekti wevatengi vedu kuburikidza nemagadzirirwo eshongwe eDhina uye zvakare kuona kurongeka kwechimiro chakaringana kuitira kuti saiti gadziriso ibviswe.
akangwara kugadzira unoshandiswa nevakawanda zvirimwa zvedu. Inventory control iri kuburikidza neE ERP masisitimu uye yakazara yekugadzira maitiro inodzorwa neindasitiri software. Iyo yekunyepedzera inonyatso kuzivikanwa nevanjiniya vekambani.
100% Raw Chishandiswa Kutsvaga kubva kuMabhiridho kusvika Kupedza Towers. Isu tinoshandisa 100% Kwayedzwa Billets kubva kuhurumende-muridzi weSimbi Zvirimwa chete.
Yakasimba Hunhu Kuvimbiswa uye Yemazuva Ano Kuyedza Laboratories
Yakanakisa muPakeji & Bunding maitiro uchishandisa Wire Weaving uye Metal Strapping kuona Faster Inventory kuyananiswa uye zero kushomeka kwezvinhu panzvimbo.
Kuwedzera Lashing & Choking Kurongedza maitiro eExport midziyo
PaSkipper Limited, tinopa vatengi vedu izere-renji-cum-dzakasiyana chigadzirwa bhasiketi kubva pa66 KV kusvika 800 KV Towers (Imwe Dunhu, Dunhu Diki, Multi-Circuit Towers inokodzera Twin, Triple, Quad kana Hex Conductor masisitimu). Tinogona kupa zvishongedzo zveTower sezvinoenderana nemuIndia pamwe neInternational mamakisi ezvinhu kubva BSEN kusvika ASTM kusvika GOST.
Transmission tower idare rakareba, kazhinji simbi yekamuri yesimbi, inoshandiswa kutsigira kumusoro kwesimba tambo. Isu tinopa zvigadzirwa izvi nerubatsiro rwe
vanoshanda vanoshanda vane ruzivo rwakakura mundima iyi. Isu tinoenda kuburikidza yakadzama mitsara ongororo, mamepu emigwagwa, kuona kwemashongwe, chati chati uye dhizaini dhizaini uchipa izvo zvigadzirwa.
Chigadzirwa chedu chinofukidza iyo 11kV kusvika 500kV apo inosanganisira akasiyana shongwe mhando semuenzaniso kuturika shongwe, shungu shongwe, kona shongwe, magumo shongwe nezvimwe.
Pamusoro pezvo, isu tichine yakakura dhizaini dhizaini dhizaini dhizaini yekupihwa kana vatengi vasina madhirowa.
Chigadzirwa zita Transmission mutsetse shongwe
Voltage giredhi 110-330kV
Kureba kwezita 18-55m
Nhamba dze bundle conductor 1-8
Kumhanya kwemhepo 120km / h
Hupenyu hwese Makore anopfuura makumi matatu
Production mureza GB / T2694-2018 kana mutengi anodikanwa
Raw Zvinyorwa Q255B / Q355B / Q420B / Q460B
Raw Material mureza GB / T700-2006, ISO630-1995; GB / T1591-2018, GB / T706-2016 kana Mutengi Anodiwa
Ukobvu ngirozi simbi L40 * 40 * 3-L250 * 250 * 25; Ndiro 5mm-80mm
Kugadzira Maitiro Raw zvinhu bvunzo → Kucheka → Kuumba kana kukotama → Kuongorora kwehukuru - Flange / Zvikamu Welding → Calibration → Hot kwakakurudzira → Recalibration → Packages → zvacho
Welding mureza AWS D1.1
Surface kurapwa Hot Dip kwakakurudzira
Kwakakurudzira mureza ISO1461 ASTM A123
Fastener GB / T5782-2000; ISO4014-1999 kana Mutengi Anodiwa
Bolt performance chiyero 4.8 ； 6.8 ； 8.8
Spare Zvikamu 5% mabhaudhi achaendeswa
Chitupa ISO9001: 2015
Kukwanisa 30,000 matani / gore
Nguva yekuShanghai Port Mazuva mashanu
Nguva yekuendesa Kazhinji mukati memazuva makumi maviri kunoenderana nekuwanda kwehuwandu
kukura uye kurema kushivirira 1%
huwandu hwehuwandu hwehuwandu 1 seti
Nzvimbo dzese dzeshongwe dzinoenda kuburikidza neakawanda-chinangwa hydraulic muchina iyo inogona kuita akasiyana mashandiro akadai sekuveura, kubaya uye kucheka. Hydraulic michina pamwe neanoenderana maturusi, jigs uye zvigadziriso zvinoita kuti zvinhu zvakakotama zvigadziriswe pasina kukanganisa. Zvikwangwani zvakamisikidzwa zvakareruka kubata zvinhu pasina kunetsekana nevashandi. Michina dzese dzakagadzirirwa kugadzirisa simbi inoenderana neakasiyana magadzirirwo eg ISO, ASTM, JIS, DIN.
XY Shongwe ine yakanyanya kuomesa bvunzo protocol kuona kuti zvigadzirwa zvese zvatinogadzira zviri zvemhando yepamusoro. Iyi inotevera nzira inoshandiswa mune yedu yekuyerera kuyerera.
Zvikamu uye Mahwendefa
1. Chemical makemikari (Ladle Analysis)
2. Tensile Miedzo
3. Bend Miedzo
Nuts uye Bolts
1. Uchapupu hweMutoro bvunzo
2. Yekupedzisira Tensile Simba bvunzo
3. Yekupedzisira tensile simba bvunzo pasi peeccentric mutoro
4. Cold bend bvunzo
5. Kuomesa bvunzo
6. Galvanizing bvunzo
Yese data rekuyedza rakanyorwa uye rinomhan'arwa kune manejimendi. Kana paine zvikanganiso zvakawanikwa, chigadzirwa chichagadziriswa kana kubvutwa chaiko.
Hunhu hweHot-dip galvanizing ndeimwe yesimba redu, Wedu CEO Mr. Lee inyanzvi mune ino ndima ine mukurumbira muWestern-China. Chikwata chedu chine ruzivo rwakakura muhurongwa hweHGG uye zvakanyanya kugona pakubata iyo shongwe munzvimbo dzakakwirira dzengura.
Kwakakurudzira mureza: ISO: 1461-2002.
Ukobvu zingi unhani
Standard uye zvinodiwa
Zingi jasi haribviswe uye rinosimudzwa nesando
Yemahara prototype shongwe musangano webasa
prototype tower Assembly inzira yakasarudzika asi inoshanda yekuongorora kuti kudhirowa kwacho kwakarurama here.
Mune zvimwe zviitiko, vatengi vachiri kuda kuita prototype tower assembly kuona chokwadi chekudhirowa uye kunyepa kwakanaka. Nekudaro, isu tichiri kupa prototype tower service service yemahara kune vatengi.
Mune prototype tower service service, XY Tower inozvipira:
• Kune nhengo yega yega, kureba, chinzvimbo chemakomba uye chinongedzo nedzimwe nhengo zvichatariswa nemazvo kugwinya kwakakodzera;
Huwandu hwenhengo yega yega uye mabhaudhi anozotariswa zvakaringana kubva kubhiri rezvinhu kana uchiunganidza prototype;
Dhirowa uye bhiri yezvinhu, saizi yemabhaudhi, mafiringi nezvimwe zvichadzokororwa kana paine kukanganisa kunowanikwa.
Mutengi anoshanyira sevhisi
Isu tinofara kuti vatengi vedu vanoshanyira fekitori yedu uye kuongorora chigadzirwa. Ndiwo mukana wakanaka kumativi ese ekuzivana zvirinani uye nekusimbisa kubatana.Kwavatengi vedu, tinokugamuchira kuAirport uye nekupa mazuva maviri pekugara.
Pasuru uye ainge atumirwa
Chidimbu chimwe nechimwe chezvigadzirwa zvedu chinonyoreswa zvinoenderana nemufananidzo. Yese kodhi ichaiswa simbi yesimbi pane chimwe nechimwe chidimbu. Zvinoenderana nekodhi yacho, vatengi vanozoziva zvakajeka chidimbu chimwe chete ndechorudzi uye zvikamu.
Zvese zvidimbu zvakaverengerwa nemazvo uye zvakapetwa kuburikidza nemufananidzo izvo zvaigona kuvimbisa kuti hapana kana chidimbu chimwe chisipo uye nyore kuiswa.
Kazhinji, chigadzirwa chichagadzirira mumazuva makumi maviri ekushanda mushure mekuisa. Ipapo chigadzirwa chinotora mazuva mashanu ekushanda kuti asvike kuShanghai Port.
Kune dzimwe nyika kana matunhu, seCentral Asia, Myanmar, Vietnam etc.
Pashure: 500kV strain tower
Zvadaro: Simba Kukodzera-Pole bhendi
SiChuan XiangYue Simba Mutsetse Zvikamu Co, Ltd.
Musoro Fekitori:Aihwa. 528, West Chikamu, Liutai Avenue, Chengdu, China HDG Fekitori:Kwete. 366, Tongxin Avenue, Chengdu, China